5 SaaS Mutengi Kubudirira Kwakanakisa Maitiro | Martech Zone
Kwakave nemazuva apo zvikwata zvevatengi zvinobudirira zvakaneta neinogumira mafoni uye vatengi kubata. Nekuti ino ndiyo nguva yekukwira zvishoma uye kugamuchira zvakawanda maererano nekubudirira kwevatengi. Zvese zvaunoda mamwe mazano akangwara, uye pamwe rumwe rubatsiro kubva ku SaaS kunyorera kusimudzira Kambani.
Asi, kunyangwe izvi zvisati zvaitika, zvese zvinosvika pakuziva maitiro akakodzera ekubudirira kwevatengi. Asi kutanga, une chokwadi here kuti unoziva iyo temu. Ngatione.
Chii chinonzi Gap rakabudirira, uye nei zvichikosha?
Nemazwi akareruka, kana izvo zvinodiwa nemutengi zvisingaenderane nezvinopihwa nechigadzirwa chako, pane mukana wekubudirira. Uye mukaha uyu urimo mukati meiyo diki yekutaurirana mhango, ayo mabhizinesi mazhinji haakwanise kuzadza. Iyi gapuro inokosha nekuti inokanganisa kugona kwako kushambadzira, kuchengetedza, kutengesa, kutengesa, uye zvimwe zvakawanda.
Heano maitiro epamusoro mashanu aunofanirwa kukwira mukati kuti usvike pamusoro peiyo kasitoma yekubudirira mutambo-chirongwa. Tarisa!
Maitiro Akanyanya #1: Taura Kutenda, Tora Matambudziko, Vaka Hukama
Imwe yedzakanakisa nzira dzekubudirira kwevatengi ndeyekusambomira kuratidza kutenda kwako. Uye zve izvi, 'maita henyu' ndiyo mantra yakakodzera kuimba.
Mwoyo weichi chiito wakarara pakuti mutengi wako akakusarudza kubva mumakwikwi ako ese. Saka kuva nekutenda kunongova kusimbisa kumutengi kuti ivo vaida zvakanakisa. Kunze kwezvo, iwe unogona kuisa izvi kumatanho akati wandei ebasa rako nemaitiro. Semuenzaniso, kana mutengi akatanga kupinda mukati, opt yemahara kuyedza, kugadzirisa zvirongwa, kana kusiya mhinduro.
Sezvo isu tataura mhinduro, iri rimwe bhokisi rakakosha kutarisa. Kurudzira vatengi vako kuti vape mhinduro pamatanho ese, uye inofanirwa kuve yakananga. Nepo kuteerera kumutengi kuchienda kure nzira mukuona kugutsikana kwevatengi, zviri zvishoma kupfuura izvo. Kana iwe ukashandisa iyo mhinduro munzira kwayo, ivo vanogona kukubatsira iwe kuona maburi ekugutsikana.
Kune izvi, ita shuwa kuti mhinduro inosvika kuchikwata chechigadzirwa. Uye kana iwe uchigona kuti izvi zviitike mune chaiyo-nguva kunyangwe zvirinani. Izvo zvakaonekwa apo vatengi vaigona kudyidzana zvakananga nezvikwata zvezvigadzirwa, kana vaongorori, ivo vanonzwa vane chivimbo chakanyanya.
Iwe unogona zvakare kuita uyu mukana wekuwana wega uye kuvaka hukama nevatengi. Nepo vatengi vako vachinyanya kukosha kwauri, unofanirwa kuvaudza kuti vazive zvakafanana.
Maitiro Akanyanya #2: Nyatso kushandisa Nguva yekumisikidza, aka Goridhe Period
Kufanana nekutanga kuratidzwa kwekupedzisira kuratidzwa, iyo yekumisikidza nguva yechigadzirwa chimwe nechimwe ndeyangu mikana yegoridhe. Ino inguva iyo mutengi paanenge achinyanya kuda maitiro kuyedza zvinhu zvitsva nemikana. Naizvozvo kuti zvibudirire, kurudzira kufambiswa kwekutaurirana kubva pakutanga chaipo.
Dhizaina akati wandei ekumisikidza zviitiko izvo mutengi anonzwa achikurudzirwa kutevedzera. Kunze kwezvo, zviumbire kuva pombi yezviitiko zvinoita kunge inokurumidza kukunda mutengi. Pamusoro, zviitiko izvi zvinofanirwa kuve zvakaenzana kwauri zvakare maererano nekugutsikana kwevatengi.
Nekudaro, ino zvakare inguva iyo iwe yaunofanirwa kukwanisa kuendesa akanakisa emasevhisi ako. Uye ndiyo nguva yakanakisa kubata nevatengi vane kunonoka kutanga kana avo vasingakwanise kuwana matanho avo. Chero kuisa maoko ako pamusoro SaaS zvigadzirwa kana kubatana nemakambani eSawaS, asi usarega chikamu ichi chichibuda.
Ngatidonhedze nugget yegoridhe! Kuita kwako munguva ino yegoridhe kunokanganisa zvakananga nzira iyo yasara yerwendo rwevatengi ichaenderera. Usakanganwa kupa zvaunogona!
Maitiro Akanakisa # 3: Tarisa pane zvinodiwa nemushandisi pane kutengesa zvinangwa
Nokukurumidza apo mabhizimisi apedza ne SaaS mutengi akakwira, ivo vanotanga nekudzidzisa vatengi vavo nezve zvese zvinotonhorera maficha. Asi rangarira ako masvomhu makirasi kumashure kuchikoro? Iwe ungangodaro wakashamisika kuti ko algebra kana trigonometry ichauya riinhi kununura iwe muhupenyu chaihwo.
Izvo zvakafanana kune vatengi vako kana iwe uchivaboora neese maficha echigadzirwa chako. Zvidzore! Paunenge uchitevera maviri ari pamusoro maitiro, iwe unowana mufananidzo wakajeka weizvo mutengi wako anoda. Uye haisi nguva yenguva here? Saka nei uchipambadza yako neyako mutengi nguva pazvinhu zvavangangodaro vasina kana kuda, kana zvirinani kwete panguva yacho?
Pedza nguva pane izvo zvinodiwa nemutengi wako uye wozopa mhinduro. Kunze kwezvo, iwe unofanirwa kugara uine nzeve kumatambudziko evatengi. Kutanga, teerera, wozobvunza mibvunzo chaiyo, wobva waendesa kuti chigadzirwa chako chingagadzirise sei nhamo dzavo. Saizvozvo, iwe unogona zvakare kutarisa mukuendesa kunoshanda kudzidziswa kune vatengi kupfuura iyo yakareba uye inofinha yedzidziso.
Maitiro Akanyanya # 4: Funga B2B seH2H yekuchengetedza zvirinani
Mazhinji mabhizinesi akashandisa yakawanda nguva nesimba mukugadzira mazano. Asi ipapo ivo vanokanganisa iko kuteedzera-kunamatira kune vamwe vese vatengi. Kufanana nevarwere vaviri vangangoda marapirwo akasiyana, kunyangwe nechirwere chimwe chete, zvakafanana zvinoenda kumatambudziko emutengi wako.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti B2B inofanira kurapwa seH2H. Fungidzira kuti Hunhu kuMunhu kana Mwoyo kuMoyo, sezvaunoona zvakakodzera, asi isa iro meseji.
Goverana nyaya dzevatengi dzekubudirira nezvikwata zvako uye uvabatsire kudzidza izvo zvinoshanda nezvisingashande. Zvishoma nezvishoma iwe unofanirwa kuvadzidzisa kuti vatore zvisarudzo zvisingabatsiri kuitira kuti vagone kununura mhinduro dzakagadzirwa. Inobatsira kuvaka SaaS yekushambadzira zano zvirinani uye zvinobudirira.
Paunonyanya kutarisa yako vatengi bhizinesi sevanhu uye kwete makambani, zvakanyanya iwe kuchawedzera kuchengetedza kwavo. Vatengi Vebudiriro Mamaneja ayo anotora aya marongero anoita kuti vatengi vachengete zvakanyanya kuwanda.
Maitiro Akanyanya # 5: Shandura SaaS Makasitoma Ekubudirira Maitiro ekukurumidza kukunda
Vatengi vanobudirira mamaneja vane akawanda mabasa, kubva pakugadzira maitiro uye ekuchengetedza iwo wega mutengi. Kunyangwe ivo vachiwana kuti vaongorore hunyanzvi hwavo hwakawanda, iwo mabasa anogona kushanduka kuita mutoro pasina nguva. Izvi zvishoma nezvishoma zvinokanganisa yako yevatengi kubudirira reshiyo.
Saka, shandisa software yekutarisira basa yekugadzirisa maitiro ako ekukurumidza kukunda munzvimbo yekubudirira kwevatengi. Automation inokupa iwe nzvimbo yekugadzirisa ako maitiro uye tarisa pane zvimwe zvinhu sekushambadzira uye kuwedzera.
Kunze kwezvo, iyo ichakubatsira iwe kudzosera kumashure uye kusimbisa yako resolution nguva. Nechekureruka asi kuchizadzikisa kwekuyerera kwekuyerera, iwe unozokwanisa kusvika kune vese vatengi, nenguva. Zvakare, iwe uchawana nguva yekuongorora uye kugadzirisa mashandiro eiri nani kukura tarisiro.
Mhedzisiro yacho ichave yakakosha!
Saka aya ndiwo marongero anoita mutengi SaaS kushambadzira inogona kubatsira bhizinesi rako kwenguva refu zvinangwa. Icho chigadzirwa chinokanganisa chinogona kuunza kune ako ese mutengi manejimendi uye ekushambadzira maturu munzvimbo imwechete. Iyo intuitive uye inotyisa chikuva iyo ichakubatsira iwe kubva mukuwedzera kwevatengi kuchengetwa kusvika pakuparadzira iro rinotapira izwi remuromo, isu tese tinoshuva.
Tags: kushandiswab2bmutengi anokwiramutengi kubudirirakukwirasaassoftware sebasakubudirira gap
DMP Kubatanidzwa: Dhata-Inotungamirwa Bhizinesi Yevaparidzi